ओलीले राजीनामा दिनेमा मलाई शंका छ: देउवा - Gandak News
गण्डक न्यूज द्वारा १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार २२:१३ मा प्रकाशित 0
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको बताएका छन् ।
महेन्द्र नारायण निधिको ९९ औं जन्मजयन्तीको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले कांग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टी भएको भन्दै सर्वोच्चको फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको बताएका हुन् ।
देउवाले संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएका कारण चुनाव हुन्छ भन्ने लागेको टिप्पणी गरे । उनले नेकपा भित्र दुई पक्ष रहेकाले अझै के हुन्छ भन्ने अन्यौल कायमै रहेको बताउनुभयो । शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उनले राजीनामा दिनेमा आफूलाई शंका रहेको जिकिर गरे ।
शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने भन्दै उनले भने, ‘ओलीजीले संसदमा बहुमत पुर्‍याउनुपर्छ, नभए छोड्दा राम्रो हुन्छ । तर यसो गर भनेर हामीले भन्ने होइन ।’ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक हेरेको भन्दै उनले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाउन लागिएको धारणा पनि राखे ।
सभापति देउवाले भने, ‘सुरुमा स्टे अर्डर देला भन्ने लागेको थियो । तर स्टे अर्डर नदिएको हुनाले चुनाव हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो । ’ त्यहीकारण संसद पुनर्स्थापना भएपनि मान्छौं, चुनाव भएपनि मान्छौं भनेको उनको दाबी छ ।
यद्यपि संसद पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च फैसलाले प्रजातन्त्रको जित भएको देउवाले टिप्पणी गरे । माधव नेपाल–प्रचण्डजीहरु कसरी जान्छन् ? नेकपा के हुन्छ ? भन्ने प्रष्ट नभएकाले अझै के हुन्छ भन्ने अन्यौल रहेको कांग्रेस सभापति देउवाले बताए ।
त्यस्तै, कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले नेकपाको आधिकारीक अध्यक्ष को हो भन्ने बिषय जनताले थाहा पाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले कांग्रेसले पनि आगामी रणनीति तय गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुले अहिंसा र शान्तिका लागि महेन्द्र नारायण निधिले खेलेको भूमिकाको चर्चा गरेका थिए ।